Waxaa nasoo wacay wadaad isku sheegay Sh. Xuseen oo deegaankiisu yahay markii dambeen isbaranay magaalada Dowlow, hasa ahaatee
kolba meeshii looga baahdo loo dirsado. Isbarasho kadib wuxuu durbadiiba bilaabay hadal dheer oo mahadnaq ah wuxuuna aad ugu riyaaqay siduu sheegay xidhiidhka na dhex maray. Wadaadku wuxuu u hadlayay sida culimada caadiga ah. Aayado iyo axaadiis yuuna dal-dalayay. Waxaanse layaabay markii uu akhriyay xadiiskii Nabagi CS ee ka hadlayay khaatumada. Wuxuu nagu sifeeyay in cadaabkii aanu xariijimo u jirsanay ka dibna Eebe nagasoo qabtay oo xaga janada naloo soo leexiyay, eegana aanu janada qarkeedii taaganahay; “inaad janada gashaan unbaa idiin dhiman idinka yaana isuhaya manta” ayuu ku soo gunaanaday.
Wadaadkii markan kulanay mudadii aan qabsanay, waxuu isku tilmaamay inuu lamid yahay Waraqatu Binu-Noofal, markii uu umul
mu’miniin Khadiija RC uu u fasirayay wixii Nabigu CS uu arkay inuu ahaa mlakul Jibriil oo waxyi u waday. Wuxuuna yidhi; “Dhalinyaro hadaan ahaan lahaa intaan idin raaco ayaan idinla socon lahaa si aan idiinka celiyo kuwa aqliga yar ee idin mooraal jabin doona”.
Aad baan usalaamayaa halgamayaasha hawshan sida xariifnimada ah uga biyo keenay,waxaa hubaal nin badalan oo dub muslin leh in umaddan loo adeegsado
asc dhaman waaan salaamayaa bahada wakalada ONA sheekadani waa sheeko aad u mucujisa ah waxana aaminsanahay in ay meelo badan kadhacaday dadabadana maqaleen khayaamooyinka noocan ah waa tabaha gumeysi isticimaalo waan hababaka uu dadakeena kuqeebiyo marka ha laga digtoonaado geesiyasha reer ogadeniya mar walba cadawga saas ha ufashiliyaaan
waxaa kasii khatarasan say isu leeyahiin sawirka iyo sheekadu game ka ayaaaa over ah kkkkkkkkkkkkk
s/c maasha Allah waa rag cajiib ah unadababaran si qatar ah koleey ragan jabhadeey ahaayeen maxaa yeelay wax ooga aqoon badan majiro tikreega waana sababta uu uwaayay hal ciidan oo onlf ah rag isyaqaano isma sirikaraan qayaanadii iyagii beey lagadoontay dibiga goowrac weesha haku caal qaadatee tikree waa lagoowracay dabadhilifna cashar baa loo dhigay hana kuwaasaqaato waxaan layaabay halgankan in uu xaq yahay shaki iigama jiro sababtoo ah mar walba culeeys lasaaro waa uu kusii awoodeeystaa xag walba masha Allaah hadana waxaa lasii bartay tabaha gumeeysiga iyo sida loogu hadal macaaneeyo si loo fahmo xaaladahiisa ama sirahiisa guuleeysta bahda sirdoonka casriga ahoow ee taabacsan jabhada onlf